Ny Fossil Hybrid HR vaovao dia mamela an'i Wear OS | Androidsis
Ny fizakantenan'ny smartwatches nanjary olana tamin'ny mpampiasa maro hatrizay, olana iray araka ny fahitanao azy, satria raha vao mametraka ny smartphone ianao dia apetrakao ihany koa ny smartwatch, dia ny fahazarana. Raha te hankafy ireo fiasa atolotra antsika isika dia tsy misy safidy hafa.
Na izany aza, eny an-tsena dia afaka mahita safidy izay manolotra antsika faharetan'ny andro maromaro isika, na dia herinandro maromaro aza, na dia izany aza dia tsy maintsy ataontsika tsy misy loko eo amin'ny efijery sy fiasa hafa. Ilay Fossil Hybrid HR vaovao Manolotra efijery monochrome iray ahafahantsika manolotra fizakantena roa herinandro.
Ny Fossil vaovao misy efijery monochrome dia manolotra antsika, araky ny anarany, teknolojia hybrid, izany hoe, ltanana famantaranandro kilasika miaraka amina fampisehoana monochrome ao ambadika izay aseho ny fampahalalana toy ny mari-pana, ny tohatra, ny andro amin'ny herinandro ary ny dingana nataontsika nandritra ny tontolo andro.
Eo ambadiky ny tanana fotsiny ny efijery ary tsy manome olana rehefa mijery azy amin'ny antoandro be izao ary mampiseho amintsika koa ny fampandrenesana momba ny mailaka, mailaka, kalandrie, tambajotra sosialy ... Ny rafitra fandidiana ampiasaina dia tsy Wear OS, ka Tsy manolotra antsika ny teknolojia GPS na NFC hahafahana mandoa vola avy eo amin'ny tanantsika.
izany tsy midika hoe nijanona tsy niasa tamin'ny Google intsony i Fossil, satria ity modely ity dia miompana amin'ny akany manokana an'ny mpampiasa. Mitohy miaraka amin'ny OS OS ho an'ny modely manaraka kasainy hatomboka ny fosily, satria izy irery no misy amin'izao fotoana izao eny an-tsena maimaimpoana (Samsung tsy manome alalana ny Tizen amin'ireo mpanamboatra hafa). Ny vidin'ny fiandohan'ny Fossil Hybrid HR dia 199 euro miaraka amina fantsom-by vy sy fehy silika (misy fehy hoditra sy vy ihany koa), mitaky Android 5 na taty aoriana ary manana Bluetooth 5.0.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny Fossil Hybrid HR vaovao dia miala amin'ny Wear OS
Navoaka ny famaritana sy ny vidin'ny Vivo Z5i
Samsung Galaxy A71 dia ho avy tsy ho ela miaraka amin'ny chipset Exynos 980 sy ny fanohanana 5G